INintendo inokuyeka ukwenza i-Wii U ngolwesiHlanu | Iindaba zeGajethi
Nintendo ineenkwenkwezi kwintengiso kunye neTshintsho lomdlalo womdlalo omtsha, kwaye ukusukela oko yaboniswa ukuze iintsuku ze Wii U Kwimarike babalwa. Nangona kunjalo, akukho mntu okanye phantse akukho mntu ulindeleyo kukuba inkampani yaseJapan izakuyiphelisa ngokukhawuleza. Kwaye kunjalo uninzi lwamajelo eendaba lubonisa ukuba ingayeka ukwenziwa ngalo Lwesihlanu.
Okwangoku akukho siqinisekiso sisemthethweni sivela eNintendo, kodwa ayisimangalisi kwaphela ukuba iyekile ukuvelisa kunye nokuthengisa kwakamsinya, kuba yenzekile ukuba ithathe indawo yesibini kwinkampani, nangona sijonga amanani ukuthengisa andicacanga ukuba wayekhe waba kwindawo yokuqala.
I-Wii U ithi i-unit yezigidi ezili-13 ezithengiswe emhlabeni jikelele, into enokuvakala intle ngokwenene, kodwa xa uyithelekisa nentengiso yezinye iiNintendo Consoles, uyaqonda ukuba ibisilele. Umzekelo, i-Gamecube ikwazile ukufikelela kwinani leeyunithi ezingama-21 ezigidi ezithengisiweyo, kwiiyunithi ezingama-32 ezigidi zeNintendo 64 okanye ezingama-101 ezigidi ezithengiswe yi-Wii yoqobo.
INintendo okwangoku ilinganiselwe ekuthini "abananto banokwazisa ngayo ngalo mbandela", nangona sisoyika ukuba phambi koLwesihlanu siza kuba neendaba apho bazakubhengeza ukuphela kokwenziwa kwe-Wii U.
Ngaba ucinga ukuba iNintendo kufuneka igcine i-Wii U kwintengiso ngaphandle kokufika koTshintsho?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » INintendo inokuyeka ukwenza iWii U ngolwesiHlanu
Bayazi ukuba soze iyeke ukwenziwa kotywala. Elo phepha silisebenzisa kwigumbi lokuhlambela. Ukuba bayayijoyina yenziwe ngezinto ezifanayo
IGearBest isungula uguqulelo lweSpanish kwaye isinika izibonelelo ezilungileyo zokubhiyozela